ILavenderVilla ibonelela ngendlu yeeholide enethafa elikhulu kwifama yelavender, ebekwe kwipropathi enkulu yeehektare ezi-3 ejikelezwe yigadi yelavender kunye nehlathi lepine. Ipropathi ibonelela ngevenkile ye-lavender eyenziwe ekhaya, indawo yokudlala yabantwana, indawo yevoli, kukho ichibi apho iindwendwe zinokuloba khona. Ukusetyenziswa simahla kweebhayisekile ezinesihlalo somntwana kunye nezigcina-ntloko. Ngomrhumo owongezelelweyo sinika i-sauna kunye ne-tube eshushu. Uhlobo: Unyaka wonke. Indlu yeeholide ifumaneka kwi-6 km ukusuka eGrobina kunye ne-15 km ukusuka eLiepaja.
Indawo yethu yokuhlala ibekwe kwipropathi yentsapho yasemaphandleni / ifama yelavender, apho siqhuba ifama yelavender, kwipropati undwendwe lwethu lunokonwabela ukuzola kwebala lethu lelavenda, indlu yeeholide ijikelezwe lihlathi lepine.
Idolophu yaseGrobina ikwiikhilomitha ezi-6 ukusuka kwindlu yethu yeeholide.
Idolophu yaseGrobina yodwa, kuba kwakukho iziko lokuhlala abantu baseScandinavia kuLwandle lweBaltic, oluthelekiseka ngeendlela ezininzi neeDolophu zeViking njengeHedeby neBirka. Siza kucebisa ngokobuqu ezona ndawo zinomdla kunye nemisebenzi.
Isixeko sesithathu ngobukhulu eLatvia i-Liepaja ikwi-15 km ukusuka kwindlu yethu yeeholide. ILiepaja lilitye elinqabileyo, elikunxweme lwaseLatvia lwaseBaltic.
Kubalulekile ukuba iindwendwe zazi ukuba isixeko saseLiepaja sineendawo ezimbini eziphambili zomdla:
1) Iziko lesixeko saseLiepaja (i-17 km ukusuka kwindlu yethu yeeholide).
Kwiziko Liepaja kunye ezingqongileyo zizele endala, izakhiwo ezintle ngamaplanga, amaqashiso Art Nouveau - zombini ngamaplanga kunye nezitena, izitrato encinane irregular, etc. Iziko kwakhona ibandakanya Seaside Park (iipaki Jurmalas) indawo, nto leyo amhlophe fantastic, unxweme lwesanti ethambileyo.
2) IKarosta (i-15 km ukusuka kwindlu yethu yeeholide), indawo esemantla yesixeko, eyayifudula iyidolophu yasemkhosini eyimfihlo yoBukhosi baseRussia (kungoko izakhiwo ezininzi zexesha leTsar) kunye neSoviet Union (iibhloko ezikhohlakeleyo zeeflethi ukusuka kwidolophu yaseRussia). Ngoo-1970 nje kufutshane ne-110 leminyaka yecathedral ye-Orthodox).
Zombini iziko lesixeko kunye neKarosta zineelwandle ezinkulu, kwaye uya kumangaliswa indlela engonakaliswanga kwaye intle ngayo ulwandle oluphakathi, kwaye imhlophe kwaye ithambile isanti! IKarosta ngokusisiseko sesinye isixeko, kuba sinembali eyahlukileyo kwaye sijonge kuyo yonke iLiepaja. I-Karosta ifanele utyelelo olwahlukileyo.